Mijoro eto amin’ny toerana masina aho androany hariva raha mijoro eto amin’ity polpitra ity eo anatrehan’ireo mpaminany sy mpahita ary mpanambara ary ireo zanakavavin’Andriamanitra mendri-kaja izay tiako ity. Fotoana tena tsara hahatongavana eto an-tany izao ary fotoana tena tsara amin’ny maha-zatovovavy. Zanakavavin’ny Raintsika any an-danitra nofinidy ianareo. Manantena aho fa takatrareo ny maha izy anareo ary akory ny fitiavan’ny Raintsika any an-danitra anareo. Tia anareo tsirairay Iz